हो’शियार , तपाईँको मोबाइल कस्तो छ ? अब यस्ता मोबाइलहरु साउन १ गतेदेखि नचल्ने : – Sadhaiko Khabar
हो’शियार , तपाईँको मोबाइल कस्तो छ ? अब यस्ता मोबाइलहरु साउन १ गतेदेखि नचल्ने :
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १६, २०७८ समय: ११:४८:०६
काठमाडौं / आगामी साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै साउन १ गतेदेखि उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आउने बताउनुभएकाे हाे । उहाँका अनुसार उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आएपछि हाल अ’वैध रुपमा भित्रिएका (बिना द’र्ताका) मोबाइल फोन नियन्त्र’णमा आउँनेछन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवै’ध रूपमा भित्रिएका मोबाइल ब’न्द गराउन भन्दै २०७३ सालदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवै’ध मोबाइल रो’क्ने प्रणाली (एमडीएमएस) जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आवेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनीले छ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो । ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । उक्त कम्पनीलाई एमडीएमएस जडान गर्न रु ८० करोड बराबरको ठेक्का दिईएको थियो ।
सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात् गत वर्षको पुस महिनामा एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नपर्ने हो तर गत वर्ष को’रोना संक्र’मणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको ब’न्दाबन्दी र हाल लागु गरिएको निषे’धाज्ञालाई देखाउँनै जडानको काम रो’किएको छ ।
वि सं २०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो ।